UVarginia Caudill - Owesifazane Ophela Ekufeni Oya eKentucky
Abasetyhini Ekufeni Bokuhlala eKentucky
UVirginia Caudill ugwetyelwe ukufa
Kukho umfazi omnye kuphela ekhosini laseKentucky lokufa, eVirginia Caudill. Fumana into awayenzayo ukuze athole indawo yakhe kumgca wokufa.
Virginia Caudill. Mug Shot
Ngomhla ka-13 Matshi, 1998, uVirginia Caudill noSteve White bahlala kunye xa bexabana nokusetyenziswa kweziyobisi zeCaudill. Ngenxa yoko, uCaudill waphuma waza waya kwindlu yokuhlaselwa yendawo.
Wayelapho waya kumhlobo omdala, uJonathan Goforth, owayengabonanga kwiminyaka eyi-15. La mabini ahlala ehlanganiselwe ubusuku bonke. Ngomso wamva, uGorforth wanika uCaudill umama kwikhaya likaSteve White ukuba acele imali.
Ukuva ukuba uCaudill usuke ephuma kwikhaya lendodana yakhe, uLonetta White, owayeneminyaka engama-73 ubudala, wavuma ukumnika i-$ 30 kwindlu yehotele. UCaudill wanquma ukusebenzisa imali ukuze athenge i-cocaine endaweni yoko.
Ngomhla ka-15 Matshi, malunga ne-3 ekuseni, kunye ne-cocaine behamba kwaye banesidingo esingaphezulu, uCaudill noGoforth babuyela ekhaya likaNksz. Xa i-White iphendula umnyango wayedla ngokufa .
Ngomhla ka-15 Matshi, amapolisa abuza uCaudill ophikisana naluphi na ukubandakanyeka, echaza ukuba wayedlile ngokuhlwa kunye neGoforth. Ngaphambi kokuba amagunya anethuba lokuthetha neGoforth, abo babini babaleka uhulumeni, baqala ukuya eOcala, eFlorida, ngoko ke iGulfport, Mississippi.
Emva kweenyanga ezimbini ehamba kunye, uCaudill washiya iGoforth eGulfport waza wabuyela eNew Orleans, eLouisana, apho wayebanjwe khona emva kweenyanga ezintandathu. Wavuma ukuba wayekhona ngexesha lokubulala, ukuchaza ukuba uGoforth wayejongene nokubulala kwakhe.
Umntu Omnyama ongaziwayo
I-Goforth ibanjwe kungekudala emva koko yamxelela amapolisa ukuba uCaudill kunye nomntu ongaziwayo wase-Afrika-waseMelika wabulala uMhlophe. Kamva wavuma enkundleni ukuba wayilungisile inxalenye malunga nokuba yindoda yesibini kwindawo.
UCaudill kunye neGoforth babethetha ngokubulala. Ngokutsho kukaCaudill, xa i-White iphendule umnyango, uCaudill wamcela ukuba afumane imali engakumbi kwigumbi lehotele. Xa i-White iphendukile ukuya ukuyifumana, iGoforth yabuyalela abafazi ngaphandle kwesixwayiso. Emva koko wabopha izandla zikaCaudill waza wamenza ehleli egumbini xa ehlutha indlu.
I-Goforth yatsho iCaudill ukuba imncede alahle umzimba we-White, awayewubophe ngephepha. Emva kokubeka umzimba wakhe kwisiqwenga seMoto, uCaudill noGoforth baqhubela imoto kunye neloli yakhe kwintsimi engenamntu apho babeka imoto ngomlilo.
I-Goforth ibonisa iFinger kwiCaudill
Ngexesha lovavanyo , iGoforth yangqina ukuba iindima zatshintshiwe kwaye kwakuyiCaudill ehlasela uMhlophe. Uthe uCaudill wasebenzisa isizathu sokuba babe neengxaki zeenqwelo-moya ukuze bangene ekhaya laseMhlophe, kwaye kamva wangena kwi-White emveni kwekhanda ngentsimbi xa engavumi ukunika isibini nayiphi na enye imali.
I-Goforth nayo yangqina ukuba uCaudill washaya i-White ngokufa ngesando, waza wabuyela ekhaya, wathatha naziphi na izinto ezixabisekileyo ayezifumene.
Kwakhona wathi uCaudill nguye owayengumzimba we-White emzimbeni kweso sikhwama waza wamqinisekisa ukuba amncede alayishe emotweni yeMhlophe.
I-Jailhouse Izaziso / isigwebo
Ngethuba lokuvalelwa kweCaudill, amabanjwa amabini axelelwa ngabasemagunyeni bafakazela ukuba uCaudill wavuma ukubulala uMhlophe, nangona ngamnye umcebisi wenza iziganeko ezahlukeneyo malunga nendlela abulala ngayo uMhlophe.
Omnye ubungqina bokuthi uCaudill wamkela ukuxabela uNksz White phezu kwentloko kabini ngewashi lomdonga kwaye omnye umcebisi wathandela ukuba uCaudill wabulala uMhlophe xa wamthatha ukuba aphule ekhaya.
Bobabini abacebisi bathi uCaudill uvume ukuphanga ikhaya nokubeka imoto yaseMhlophe ngomlilo.
Ngomhla wama-24 kuMatshi 2000, i-jury yafumana iCaudill kunye neGoforth inetyala lokubulala, ukuphanga kokuqala, ukugqithiswa kwe-first-degree, i-degree-degree degree, kunye nokuphazamisa ubungqina obubonakalayo. Bobabini bafumana isigwebo sokufa.
UVirginia Caudill uhlala kwindawo yokufa e-Kentucky Correctional Institute for Women in Pewee Valley.
UJohanathan I-Goforth ihlala kwindawo yokufa e-Kentucky State Penitentiary e-Eddyville, eKentucky.
Ngomnyaka ka-2015, uHarold McQueen nguye kuphela obulawe eKentucky ngokungabandakanyeki ukususela ngowe-1976.
U-Edward Lee Harper (owabulawa ngoMeyi 25, 1999) kunye noMarco Allen Chapman (owenziwe ngoNovemba 21, 2008) bobabini bavolontiya ukubulawa. UHarper wehla zonke izibheno ezitshoyo ukuba mhlawumbi uyafa kunokujongana nokuhlushwa kwentolongo. UChapman wakhulula zonke izibheno ezingekho komthetho ngexesha lokugwetywa.
UCaroline Young Wabulala Abazukulu Bakhe Ukuziphindezela
Umntu ongatshatanga (1964) nguChristopher Isherwood
Ukubola kweMpawu zoBomi boBomi boBomi
Inkolelo-ngqungquthela ye-bowling - Ukuphosa iHokki yenza i-Bowler Great
Agnivarsha: 'Umlilo & Imvula'
Cinga ukutshala i-Maple ebomvu kwiYard yakho